Maitiro - Nantong Global Packaging Zvigadzirwa Co, Ltd.
Kubva pakuita tsvagiridzo uye kunzwisisa mutengi kuumba kugadzira uye kuwanda kuburitsa chigadzirwa, isu tinotarisira zvakanyanya kurongedza kwako.
Kavha inopfuura yekuchengetedza chigadzirwa; ndiwo mugero wechiratidzo chako kuti utaure kune vatengi vayo uye unoshanda sechinhu chakakosha chekushambadzira. Tinopinda mukudzidza kwakadzama kwechigadzirwa takabatana nemutengi.
Iyo yekudhirowa inopihwa kune yedu-mumba dhizaini timu ine yakasanganiswa indasitiri ruzivo rweanopfuura gumi gumi emakore uye vanoziva nezve demographic dhizaini yekuda kwenyika zhinji. Iyo mold ichagara ichigadziriswa. Pakupedzisira, muenzaniso wemuenzaniso unogadzirwa.
Mould sampuli kubvumidzwa kwechimiro dhizaini, kurongedza kunoedzwazve kuyedzwa kwesimba rayo, aesthetics, kushanda zvakanaka uye nyore kwekushandisa.Pakupedzisira, kurongedza kwacho kunoenda kunogadzirwa kunzvimbo yedu-ye-iyo-iyo-yekugadzira yuniti unit, inonamatira kune inoomesera mhando bvunzo. Isu tinopawo kugovera kwakawanda kwechigadzirwa post-kugadzirwa.